Jery taratra… herinandro | NewsMada
Niditra an-tanety tao Soalala i Belna: ahina ny tondradrano amin’ny faritra maro ...décembre 10, 2019
Résultats provisoires : Naina Andriantsitohaina rafle la mise ...décembre 10, 2019
Conjoncture politique : Tim et HVM dans une logique de trouble
Par Taratra sur 25/08/2018
Be kandidà fa be olana…
46 ireo nametraka ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC). 36 ny nahazo fankatoavana fa nihintsana ny folo, nisy tsy nahaloa ny rotsa-bola, tsy nanana fanamarinam-ponenana, tsy ao anaty lisitry ny antoko eny amin’ny Atitany ny nanolotra azy…
Hanao antsapaka izay ho filaharan’ireo kandidà 36 ao amin’ny biletà tokana ny Ceni, anio. Hamoaka ny volavolana sata hosoniavin’ireo kandidà hisian’ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana ny Komitin’ny fampihavanana malagasy (CFM). Hisy ny fihaonany amin’ireo kandidà amin’izany.
Nivoaka ny vokatry ny fanadinam-panjakana CEPE, azo lazaina ho tsara raha mitaha ny tamin’ny taon-dasa. Noho ny antony samihafa, tsy hanala baraka sy tsy hahazoan’ny fitondram-panjakana tsiny? Teo ny fotoam-pialan-tsasatra tsy fidiny noho ny valanaretina pesta, ny tondradrano, ny fitokonan’ny mpampianatra.
Nilaza hampiakatra ny saran-dalan’ny taxi-be ho 500 Ar, hanomboka ny 1 septambra, ny kaoperativa UCTU, Antananarivo Renivohitra. Ny fiakaran’ny vidin-tsolika, tsy mbola tonga amin’ny vidiny tena izy, hatrany ny antony. Nefa tsy azo ara-potoana ny vola fanampiana omen’ny fanjakana hanentsenana ny banga.
Amin’izao fialan-tsasatra izao, tsy azo antoka be ihany ny fandriampahalemana amin’ny lalam-pirenena. Amin’ny RN 4 mankany Mahajanga, ohatra: misy ny tsy fifankahazoana fa tsy eken’ny mpitatitra ny fanomezana solontsakafo ny mpitandro filaminana amin’ny fanaovany ny asany: miaro ny vahoaka sy ny fananany.
Manamafy ny tsy tokony hitanilan’ny tomponandraiki-panjakana amin’izao ny praiminisitra, tany Ambanja sy tany Nosy Be ary tany Mahajanga, nihaonany amin’ireo manampahefana, olom-boafidy, firaisamonina sivily… Mahatonga ny tsy fandriampahalemana ny tsy fandraisana andraikitra, ny tsikombakomba, ny kolikoly…
Mbola be ny olana mianjady amin’ny vahoaka ifotony toy ny tsy fandriampahalemana, ny ady tany, ny fidangan’ny vidim-piainana… Hamaha izany no mampirongatra be dia be ny kandidà amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika?
Lalana RN2: mihena ny fitaterana mandritra ny fanamboarana 11/12/2019
Cipres: mila ampitoviana ny fiasa 11/12/2019
EITI Madagasikara: nivoaka ny tatitra 2017 sy 2018 11/12/2019
Fandalovan’i Belna: potika hatrany amin’ny 90% ny distrikan’i Soalala 11/12/2019
Oniversite Fianarantsoa: rotaky ny mpianatra nivadika ho doro trasy fanimban-javatra 11/12/2019
An-kitsim-po: ny aina, tsy ananam-piry